Andifuni Ukuphoswa yinto ngu-Aerosmith - Izinto Zobugcisa
Andifuni Ukuphoswa yinto ngu-Aerosmith
Oku kubonisiwe kumdlalo bhanyabhanya IArmagedon , eneenkwenkwezi kwintombi kaSteven Tyler, uLiv Tyler. U2 babeceliwe kuqala ukuba benze le ngoma kumdlalo bhanyabhanya-umbono weAerosmith uwenza kuphela emva kokuba uLiv ephoswe.
Imveliso enkulu ene-okhestra engama-52, le yayiyeyona nto ibalulekileyo e-Aerosmith kwi-US Hot 100, kunye ne-chart-topper yabo kuphela. Kwakuyi # 1 US iiveki ezine ngoSeptemba 1998, iba yenye yeengoma ezaziwa kakhulu zonyaka.
Ingoma yafumana iqhuma elikhulu ekubekweni kwayo IArmagedon , eyathi kwihlabathi liphela yayiyeyona bhanya-bhanya iphambili ka-1998.
UDiane Warren ubhale le ngoma, emalunga nokuxabisa wonke umzuzu ochitha nomnye umntu. Ezinye iingoma ezibethwayo uWarren wabhala zibandakanya ' Akhonto izakusiyekisa ngoku 'nge-Starship,' Ukuba ndinokuLibuyisa ixesha 'nguCher,' Xa Ndikubona Uncuma 'ngesiNgesi esibi, kwaye' Ndiza kukuxokisela (kwaye yiyo iNyaniso) 'ngeSonka seNyama.
UDiane Warren ufumene ugqozi kule ngoma emva kokuva ngodliwanondlebe apho uJames Brolin wathi xa umfazi wakhe uBarbra Streisand engekho, wamkhumbula naxa wayelele. Xa wayezimisele ukubhala ingoma IArmagedon , wayecinga ukuba le yinto elungileyo ukuyithetha, kuba le bhanyabhanya ijongene nentshabalalo ezayo yoMhlaba.
Le ngoma yandisa ulawulo luka-Aerosmith njengebhanti elitshisayo kakhulu lama-90s. I-albhamu yabo ye-1993 Fumana ukuphumla iqulethe ii-singles ezine ezibetha kakhulu ezenze kakuhle kwi-MTV. Ngesizukulwana esitsha sabalandeli esifumana ikhathalogu yangemva yeqela, babedume njengangaphambili, bethengisa imiboniso kwihlabathi liphela. I-albhamu yabo elandelayo, Ubomi obulithoba , kwakungumzabalazo wokwenza kwaye awuzange ukhutshwe kude kube ngo-1997. Kwakungathandwa kangako, kungekho namnye kubo owaphula i-Top 25. I-Aerosmith yayisenokugcwalisa amabala emidlalo, kodwa kwafuneka iphume endleleni ngo-Epreli 1998 xa uSteven Tyler wakrazuka i-ACL yakhe kwimakrofoni ime ngokungalunganga ngexesha lomboniso e-Anchorage.
Ibhendi yayihamba kwaye ijongene nezihlalo ezingenanto xa beqala ukhenketho lwabo ekupheleni kwehlobo, kodwa le ngoma yavuselela ubutyebi babo. Ukhenketho lwaqala kwakhona nge-9 kaSeptemba, xa 'Andifuni kuphoswa yinto' yayiyingoma # 1 eMelika. Igama lesihloko sealbham lingqineke lisaziwa, nanjengoko baphinda baba ngabona badlali baziwa kakhulu elizweni, besazibekile phantsi ngelixa abantu bexesha labo abanjengoRolling Stones benyanzeliswa ukuba bathembele kwilifa labo lokuthengisa amatikiti.
Inkqubo ye- IArmagedon Isandi, esiqiniswe yile ngoma, saya # 1 e-US. Iqulethe ezinye iingoma ezintathu zeAerosmith: ' Imvakalelo emnandi , ikhava yabo ethi 'Yizani Ndawonye,' kunye nengoma entsha ebizwa ngokuba 'Luhlobo Olunjani Lothando Olukulo,' ababezirekhode Ubomi obulithoba icwecwe kodwa khange lisike.
Nokuba umbhali wale ngoma, uDiane Warren, wayifumana kancinci. Uxelele Ukwenza umbhali wengoma : 'Amanye amagama, anjengokuthi' Ndinokuhlala ndivukile ukuze ndikuve uphefumla, 'ndingathanda ukuba,' Hayi, sukuyenza loo nto. Sukundibukela ndiphefumla. Andizokwazi ukulala. Hamba uye kwenza enye into. ' Ihlekisa kakhulu, kuba inxenye yam ayinakuze ifune umntu ukuba ayithethe loo nto kum, kodwa kwakhona, ndiyayibhala. '
Ukunika iingcinga zakhe zokuba nengoma yengoma iyeyona nto ibalulekileyo e-Aerosmith, ugqirha ugqirha uJoe Perry wachaza Iliwa lakudala ngo-2002: 'Ngelo xesha, sasingenalo ixesha lokuzinza kwaye sikwenze. Besiphumile endleleni, ke basingenise ukuze babukele imovie kwaye bathi 'nantsi ingoma, kulapho ingena khona kumdlalo bhanyabhanya, ungayenza ukuba uyafuna.' Ke besise studio kwisithuba seentsuku ezintathu ukusika. Ewe, sinqwenela ukuba sibe nexesha elongezelelekileyo, ukuze sibe nokubhala, kodwa yayilixesha elifanelekileyo. Ingoma ibimnandi, abantu bayayithanda, kwaye andicingi ukuba abantu bayakhathala ukuba ngubani oyibhalileyo. '
Xa uDiane Warren wabhala le ngoma, wayecinga ukuba umntu ofana noCeline Dion uza kuyicula. Wamangaliswa xa umzobi wajika waba yiAerosmith, kodwa yaphela isebenza kakuhle. Ndiyakhumbula ukuba ndandise-Sunset Marquis Hotel, kwaye ndihleli nepiyano kunye naye ndimfundisa ingoma kwaye ndinemizimba kuwo wonke umzimba wam njengoko ndayiva ingoma iphila ngelizwi lakhe kwaye ndisazi ukuba izakuba yintoni, uxelele Ukwenza umbhali wengoma Malunga nokusebenza noSteven Tyler kwingoma. 'Yayingamava amangalisayo. Ndandibhalele uAerosmith ngaphambili, kwaye ngekhe bazenze iingoma esizibhalileyo.
Imvumi yelizwe uMark Chesnutt wayigubungela le kamva ngo-1998, wayenza ukuba ibe yingoma yesihloko se-albhamu yakhe yesibhozo. NgoFebruwari 1999, inguqulelo yakhe yaphosa itshathi yelizwe yaza yenyuka yaya kwi # 17 kwi-Hot 100, kwiinyanga ezintlanu emva kokuba iAerosmith ibethe kwindawo ephezulu kunye neyokuqala.
Uya kuqaphela ukuba uSteven Tyler ngokumangalisayo umile kwividiyo. Kungenxa yokuba wadutyulwa emva kokulimala edolweni, kwaye wayenxibe into exakileyo ethintela intshukumo yakhe. Umlawuli wevidiyo, uFrancis Lawrence, wasebenzisa iifotsholo ezininzi ukusondela.
I-Aerosmith yenza isishwankathelo soku ngesiqingatha sexesha somboniso we Super Bowl ka-2001, ngaphambi kokuya ku 'Walk This Way' kunye no N'Sync, Britney Spears, Mary J. Blige, no Nelly.
Oku kwaphumelela ngo-1999 uNickelodeon Teen Choice Award kwiNgoma yothando yoNyaka.
Kuphando olwenziwe ngo-2008 ngumjelo womculo wentambo iMagic TV, oku kwavotelwa ngababukeli base-UK njengengoma yothando lwesizwe.
Umlo wamanqindi waseBritane onzima uTyson Fury ubhiyozele uloyiso lwakhe olunomsindo nge-28 kaNovemba ngo-2015 ngaphezulu kuka-Wladimir Klitschko waseUkraine eDusseldorf, eJamani kunye nekaraoke. 'Ndithembisile wonke umntu ukuba ndiza kucula ingoma emva kwalo mlo, utshilo uFury. 'Ke oku kubalandeli bam base-UK, abalandeli bam baseIreland, abalandeli bam baseMelika kunye nabalandeli bam abatsha baseJamani; kwaye ngaphezu kwako konke, oku kukuzinikela kum mfazi. ' Intshatsheli entsha esindayo enzima emva koko yaqhubeka bhinca le ngoma .
Ukuthathela ingqalelo ukuba uhambe imijikelo eli-12, ibingenguye uguquko olubi. UJoe Perry wachukumiseka. Ndacinga ukuba kulungile!, Uxelele IVanyaland . 'Ukuzibopha ngale ndlela ... thetha ngokuba semgangathweni. Umnqwazi wam uyekile kuye; kwaye ukuculela umfazi wakhe… ungumsebenzi weklasi! '
rock a bye baby amazwi intsingiselo
reo speedwagon qhubeka nokukuthanda lyrics
I-eminem ihlambulule 'ikhabethe yam